‘भारतले नेपाल खानेभयो, गंभीर षडयन्त्र हुँदैछ।’ नेपालको यो मनोआतंक होस् अथवा भारतको प्रायोजित खेल, यसको कुनै अर्थ छैन। भारतले कुनै हालतमा पनि नेपाल खान सक्दैन। किनभने आजको नेपाल सन १९७५ को सिक्किम होइन। उसै पनि सिक्किम भारतको संरक्षित राज्य थियो। तर न...
सामाजिक परिवर्तन बाहिरबाट कसैले ल्याएर थोपरिदिने होइन। त्यसरी थोपरिदिनेले नेपाल चिन्दैन। नेपालका जनतालाई त्यो परिवर्तनप्रति रौँ बराबरको चासो हुँदैन। यसो भनेर मैले २०३७ सालको जनमनतसंग्रह, २०४७ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको विरोध, २०६३ सालको ...
अहिलेको राजनीतिमा आफूलाई, आफ्नो देश र जनता, आफ्नो इतिहास, आफ्नो संस्कृति चिनेर म राजनीति गर्दै छु भन्न सक्ने कति नेपाली राजनेता छन्, म भन्न सक्दिनँ। पहिले मैले राजनीतिमा पाइला चाल्दा ठूलाबडाले भन्थे- 'राजनीति गर्ने मान्छेमा अर्थशास्त्रको राम्रो ज्ञान हुनुपर्...
भारतको नाम चलेको कुनै नेताले नेपालको बारेमा नकारात्मक कुरा गरे त्यो नेपाली संचारमा आतंकको ‘भाइरल’ हुन्छ। किन? बेलायतले टुक्राटुक्रामा बाँडिएको भारतलाई एकीकरण गरेपछि हामीले कुन दिन भारतीय नेताहरूको मुखबाट नेपालप्रति सद्भावको बोली सुन्न पाएका छौँ? बर...
‘मरेपछि डाक्टर’ भन्ने एउटा उखान छ नेपालीमा। यसको अर्थ हो- बिरामी नहुँदै शरीर परीक्षण गर्नु। बिरामी पर्नेबित्तिकै डाक्टर बोलाउने काम भएन भने बिरामीको सन्दर्भमा डाक्टरको कुनै अर्थ हुँदैन। नेपालको संघीयताको हालत अहिले त्यस्तै भएको छ। संघीयताको बारे...
यतिबेला नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। त्यसले के कस्तो काम गर्छ अहिले भन्ने बेला आएको छैन। पाँच वर्षको जनादेश पाएर आएको सरकारको मूल्यांकन छ महिनामा हुन सक्दैन। तर क्रुद्ध छन् संसारका पुँजीवादीहरू! उनीहरूलाई कुनै परचक्रीले आफ्नो सत्ता खोसेजस्तो भएको छ। मैले क...